Craft ဘီယာစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်မှတ်စုများ - News-NingBo COFF Machinery Co. , ltd
အချိန်: 2020-07-10 Comment: 63
အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများစွာအတွက်စက်တစ်ခုလည်ပတ်စဉ်သတိထားရမည့်အချက်များရှိပါသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိရိယာကိုမည်သို့လည်ပတ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေလိုပါသည်။
၁။ ထည့်သွင်းထားသောဘီယာစက်ကိရိယာများကိုမတိမ်းပါနှင့်၊ ဖြောင့်မတ်စွာနေရမည်၊ ရွေ့လျားမှုအားမထောက်ခံပါ။ အကယ်၍ သင်သည် power supply ကိုဖြုတ်။ ပိတ်ပါ၊ ရွေ့လျားနေစဉ်အတွင်းဖြောင့်မတ်စွာနေပါ။
2. ဘီယာစက်ပစ္စည်းများကိုသေသေချာချာပြုပြင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ brewing ပြီးသွားရင် power plug ကိုဖြုတ်ပြီး co2 ပုလင်းပေါ်ရှိ switch ကိုပိတ်ပြီးဖိအား gauge knobs ကိုပြန်လှည့်ပါ။ အကောင်းဆုံးဘီယာကုမ္ပဏီများသည်အပူချိန်ထိန်းချုပ်သောကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ သူတို့ကိုအလွယ်တကူချိုးဖျက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်တိုအတွင်းအသုံးပြုခြင်းမရှိလျှင်စက်ကိုခြောက်သွေ့သောနေရာ၌ထုပ်ပိုးပြီးနောက်တွင်အပြင်ဘက်နံရံကိုသန့်ရှင်းစေသင့်ပါသည်။
3. ဘီယာစက်ကိရိယာများသည်ရေအရည်အသွေးနှင့်ရေ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။ လိုအပ်ပါကအထူးဆပ်ပြာသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးရေဖြင့်ဆေးပါ။ မော်တာကိုရေထိတွေ့ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ပြုပြင်နေစဉ် , မော်တာပေါ်ရေမဖြန်းဖို့သတိထားပါ။ သန့်ရှင်းရေးဆေးပေးစက်နှင့်စပျစ်ရည်ကို ဦး ခေါင်းမကြာခဏစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ gasket elastic မပါလျှင်, သူကအစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် www.coffbrewing.com/faqs ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင် (wellish@nbcoff.com) အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်၊ သင့်ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမည်။
ယခင်: ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှုသည် ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များအကျိုးခံစားရသည်
နောက်တစ်ခု: Craft ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်း - Saccharification စနစ်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ - စက်ပစ္စည်းနှစ်မျိုး